INTSINGISELO YEGREEN AVENTURINE + IZIBONELELO ZOKUPHILISA - INANI
Intsingiselo yeGreen Aventurine + Iipropati zokuphilisa
Xa ubomi buziva ngathi $ h! Betha nje ifeni kwaye ukulungele ukujika ithamsanqa lakho, ungajongi ngaphaya kwe-aventurine eluhlaza. Eyaziwa njengelitye lokuchuma, impumelelo, ubuninzi, kunye nenhlanhla, ukuphatha isiqwenga sekristal epokothweni yakho, isipaji, okanye kwisibingelelo sakho kuya kuhamba ithamsanqa kuwe. Eyona ndlela ixhaphakileyo ye-aventurine iluhlaza, eyahlula ukusuka kumbala omdaka ukuya kumbala oluhlaza, kwaye xa ipolishiwe inokudideka ngokulula nejade eluhlaza. I-Aventurine inokufumaneka ngokwendalo ngemibala eyahlukeneyo, njengobomvu, luhlaza okwesibhakabhaka, tyheli, orenji kunye nesilivere. Imibala eyahlukeneyo inezinto ezininzi ezifanayo, kodwa ngeenjongo zale bhlog namhlanje, siya kubambelela kwi-aventurine eluhlaza.
Le kristale intle iphuma kumandla othando, azolileyo, azisa uxolo kunye nokulingana ngokweemvakalelo kwabo banexesha elinzima lokulawula uxinzelelo, umsindo, kunye noxinzelelo, ngokukhulula izinto ezindala ezinamathelisiweyo, kunye neepatheni zokuziphatha ukuze uqhubeke uvuya, ithemba, ukuba nethemba, ukonwaba, ubuchule bokuyila, kunye nokufumana umbono oqinisekileyo kwihlabathi. Le kristale isebenza ukukhupha ezi patheni zinamandla kwi-etheric, ngokwengqondo nangokwasemzimbeni imizimba ye-biofield (aka iileya ze-aura). Kuthiwa i-aventurine eluhlaza inokukunceda uqhubele phambili ngokuzithemba, ngakumbi ukusebenza kwiimeko ezinzima, kolu hambo lwe-roller coaster silubiza ngokuba bubomi! Kuyasikhuthaza ukuba siqhubele phambili, samkele utshintsho, kwaye sibe kumzuzu wangoku. Ukusebenzisa le kristale kuya kukunceda ubone izinto ngokwembono entsha -i 'icala eliqaqambileyo,' kwanaxa izinto ziziva zingaphaya kolawulo lwethu kwaye zingathandeki. Uninzi olusebenzisa i-aventurine eluhlaza luya kucamngca kwaye luyisebenzise ukubonisa ngaphambi kokuqala iprojekthi entsha, ukucela ukunyuselwa emsebenzini, ukuya kuvavanyo, kunye nokufumana izisombululo ekusebenzeni nabantu abanzima- ngakumbi usapho kunye nabahlobo.
Kwinqanaba lomzimba, i-aventurine eluhlaza ikholelwa ekuthomalaliseni iimeko ezinxulumene neenkqubo zokuzala kunye neenkqubo zovalo, ezinjengentliziyo, imiphunga, kunye ne-thymus, ukukhuthaza ukuzala, nokuphilisa abo bachacha kutyando. Kukholelwa ukuba i-aventurine eluhlaza inokuzisa ukuphilisa kwiimeko ezahlukeneyo zolusu ezifana ne-acne kunye ne-eczema.
Nangaliphi na ixesha ufuna ithamsanqa elongezelelekileyo kwicala lakho, zama ukucamngca nge-aventurine eluhlaza kwelinye icala, kwaye ucacise i-quartz kwelinye ukomeleza injongo onqwenela ukuyibonakalisa. Ingcebiso yepro: i-aventurine eluhlaza isebenza kakuhle ngeekristale ze-quartz. Ngexesha elizayo xa usitsho isiqinisekiso sakho ngokuvakalayo, beka isiqwenga se-quartz ecacileyo kwisandla esinye kunye ne-aventurine eluhlaza kwenye ngelixa usifunda. Olunye usebenziso lwale kristale lubandakanya ukubeka isiqwenga ecaleni kwefowuni yakho okanye ilaptop yakho, enokukunceda ukunciphisa ukubonakaliswa kwe-EMF kunye nolunye ungcoliseko olusingqongileyo. Unokude uthathe isigqibo sokutyibilika kwenye yomqamelo okanye uyibeke ecaleni kwebhedi yakho ngelixa ulele ebusuku. Emva kwayo yonke loo nto, sichitha isiqingatha sobomi bethu ebhedini, kutheni ungafumani izibonelelo zokulala ecaleni kwamandla amnandi wekristale?
Ukuba usebenzisa le kristale ekusebenziseni iFeng Shui, ithwala izinto zoMhlaba kunye namanzi.
Iimpawu zeZodiac ezinxulunyaniswa ne-amber zibandakanya iCapricorn kunye nePisces.
lithetha ntoni inani elingu-1111
Intsingiselo yokomoya engama-777
Iipropathi zokuphilisa i-agate eluhlaza
Ukubona intsingiselo ye-1111
imiqondiso re ukuthandana sociopath
Inani leengelosi ezingama-1044